တည်ဆောက်သို့မဟုတ်ဝယ်မည်လား စီးပွားရေးပြProbleနာများကိုမှန်ကန်သော software ဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်း Martech Zone
ဒီစီးပွားရေးပြproblemနာလား၊ နောက်ဆုံးမှာမင်းကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရည်မှန်းချက်လား။ အခွင့်အလမ်းတွေကို၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်နည်းပညာအပေါ်မူတည်ဖြစ်ကြသည်။ သင်၏အချိန်၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများအပေါ်တောင်းဆိုမှုများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏စိတ်ကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲပြိုင်ဘက်များ၏ရှေ့မှောက်၌သာနေရန်သင်၏တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းကတဆင့်ဖြစ်သည် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု.
သင်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အမှားအယွင်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ နှောင့်နှေးမှုများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာဖောက်သည်များမျှော်လင့်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုပေါင်းဒစ်ဂျစ်တယ်အလေ့အထသည် Facebook, Google, Netflix နှင့် Amazon တို့ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့် ၀ ယ်သူများသည်တူညီသောစိတ်ကြိုက်အဆင့်၊ အမြန်နှုန်းနှင့်ချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ အတွေ့အကြုံမျိုးစုံပေးသောရောင်းချသူများအားဆုချခြင်းနှင့်မရောင်းချသောရောင်းချသူများအားစွန့်လွှတ်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်။
ထိုအမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ပါ။ ဝယ်ယူသူများ၏အတွေ့အကြုံများသည် ၀ ယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစျေးနှုန်း၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များထက်ပိုများနေသည်ဟုသုတေသီများကဆိုသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်၎င်းသည်ကြီးထွားလာသည့်နာကျင်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသာမကပြိုင်ဘက်များထက်သာလွန်သောကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်လေး ဦး အနက်သုံး ဦး သည်၎င်းတို့၏အလုပ်ပမာဏကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်သူတို့၏အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ဖောက်သည်အနိုင်ရဆက်သွယ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး လျှင်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၁၀၀၀ နီးပါးဆုံးရှုံးကြသည်။Mitel).
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ - ၀ န်ထမ်းများကသူတို့၏အချိန် ၅၀% ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်နှင့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုလျှင်ပျမ်းမျှ ၁၈ မိနစ်အချိန်ဖြုန်းကြောင်းတင်ပြကြသည်။M-Files) ။ သင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုပေါင်းထည့်သောအခါထိုနံပါတ်သည် ၆၈.၆% သို့တက်သည် (CIO Insight).
အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိပါ။ စိတ်တိုင်းကျဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကိုသင်တည်ဆောက်သင့်သလား။ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတစ်ခုခုဝယ်ပါလား။ ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသောအဖြေတစ်ခုညှိပါ။ သူများသည်မြူဆိုင်းနေသော, ခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်အကျိုးအမြတ်ရှိသောနည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆင်းရဲသားများနှင့်ခွဲခြားလိုက်ခြင်းသည်ဤအချက်ဖြစ်သည် - အကျိုးအမြတ်ရှိသည့်နည်းပညာသည်စစ်မှန်သောစီးပွားရေးနှင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းသည် ပြောင်းပြန် - ရင်ပြင်.
နည်းပညာကိရိယာတစ်ခုနောက်ဆုတ်သွားသည့်အချိန်များကောအသို့နည်း။ သငျသညျရှိခဲ့ဖူး: ချွတ်ယွင်းမှု, မသက်ဆိုင်သောသို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲရှုပ်ထွေးဝန်ထမ်းများဆန္ဒပြရန်, ဒီ tool ကိုစွန့်ပစ်နှင့်အမှုအရာလုပ်နေတာဟောင်းလမ်းကိုပြန်သွားဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ အဲဒါကိုအဖြစ်အပျက်ကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကသူတို့၏လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ ဖောက်သည်များ၏ဘဝကိုမည်သို့လွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ပါ။
၃ ရွေးချယ်မှု + အဆင့် ၃ ဆင့်
စိတ်တိုင်းကျ software ကိုတည်ဆောက် (သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားဖြေရှင်းချက်ကိုစိတ်ကြိုက်)
သင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှဖြေရှင်းလိုသောပြproblemsနာများကိုအကဲဖြတ်ပါ
မင်းရဲ့အခြေအနေအတွက်ဘယ် option ကအကောင်းဆုံးလဲ?
တည်ထောင်သူ Bob Baird ပြောင်းပြန် - ရင်ပြင်Indianapolis အခြေစိုက် Custom Software Development ကုမ္ပဏီသည်အဖွဲ့အစည်းများအားသူတို့၏အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းမှရရှိသောသင်ခန်းစာများကိုဖြိုခွဲသည်။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်မိမိတို့၏အချိန်ကိုအများအားဖြင့်အချက်အလက်များကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းကြသည်။
စိတ်တိုင်းကျ software ကိုသင်တစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ကိုငါပေးမည်။
သင်၏လစဉ်ဘတ်ဂျက်သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ အောက်သာရှိသည်။
သင်၏စီးပွားရေးတွင်အမှားများ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ မှားယွင်းစွာဆက်သွယ်ခြင်းများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးဖြတ်ပိုင်းများမရှိပါ။
စိတ်တိုင်းကျ software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အနည်းငယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား:
feature list နဲ့မစပါနဲ့။ သင် ဦး စွာဖြေရှင်းလိုသောပြunderstandingနာများကိုနားလည်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲထုပ်ပိုးမှု၏နောက်ကျောရှိကျည်ဆန်အချက်များနှင့်မတူဘဲသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ကန ဦး စိတ်ကူးသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိနိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာမျှမဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရှိပြီးသားဖြေရှင်းချက်၏ရှုထောင့်တစ်ခုကိုနှစ်သက်သော်လည်း၎င်းကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျှင်၊ ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို APIs များမှတဆင့်အလိုအလျှောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသိမှတ်ပါ။
ဆော့ဗ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်းဟာကြိုတင်ငွေပေးရတဲ့ကုန်ကျမှုလိုအပ်တယ် ဒါဟာသေချာပေါက်စျေးနှုန်းမြင့်မားသည်မဟုတ်, သင်ကအဲဒါကိုလိုင်စင်လုပ်မယ့်အစားကြိုတင်ငွေပေးရမယ်။
စိတ်တိုင်းကျ software ကိုကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောအစီအစဉ်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆော့ဖ်ဝဲမလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အပြင် ၀ န်ထမ်းများက၎င်းကိုပုန်ကန်နေသည့်အချိန်တွင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းအားဖြင့် backend troubleshooting ကိုသတိရသင့်သည်။
သင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားငှားရမ်းခြင်း (သို့) Outsource လုပ်ခြင်း။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းသည်အထူးကျွမ်းကျင်ပြီးစီးပွားရေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သော web app တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်မတူညီသောကျွမ်းကျင်မှုသုံးခုလိုအပ်သည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံး (နှင့်အကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေ) စဉ်းစားခြင်းသည်ငွေဖြစ်သည်။ သင်ဤကျွမ်းကျင်သူအားလုံးကိုငှားရန်သင်တတ်နိုင်သလော။
ထပ်မံ၍ ရှုထောင့်အရအကျိုးအမြတ်များအပါအဝင်အငယ်တန်း .NET ဆော့ဖ်ဝဲ၏ပျမ်းမျှလစာသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၈၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ သင်၏အဖွဲ့ကိုချန်လှပ်ရန်အတွက်နောက်ထပ်စွမ်းရည်နှစ်စုံလိုအပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်၏စီမံကိန်းကို ၀ န်ထမ်းအများဆုံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်သင့်အားတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ကုန်ကျမည်ဟု Bob ကဝေမျှသည်။
ဤအရာသည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဖောက်သည်များပိုမိုနှစ်သက်စေရန်တည်ဆောက်ခြင်းသို့ ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲစေပါသလား။
တည်ထောင်သူ Bob Baird ပြောင်းပြန် - ရင်ပြင်
Tags: bob bairdတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ဝယ်ပြောင်းပြန်စတုရန်းsoftware development